कलाकारलाई निजी संस्थाबाट उपाधि वितरण : महानायकदेखि रियल हिरोसम्म ! – Nepal Press
कलाकारलाई निजी संस्थाबाट उपाधि वितरण : महानायकदेखि रियल हिरोसम्म !
२०७८ असार १६ गते १८:५९
काठमाडौं । पछिल्लो समय कलाकारलाई निजी क्षेत्रका केही संस्थाले उपाधि दिने चलन बढ्न थालेको छ । मिडिया हुँदै केही संस्थाले महानायक भन्दाभन्दै राजेश हमाल अहिले महानायक कहलिएका छन् ।
उनी महानायक हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको बहस सामाजिक संजालमा पटक-पटक छेडिने गरेको छ । धेरैपटक उनको महानायकत्वबारे सामाजिक संजाल पनि तातेको छ ।
केही वर्षपहिले चलचित्र प्राविधिक संघले राजेश हमाललाई महानायकको उपाधि दियो । त्यस्तै, हमालकी समकालिन अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई पनि उक्त संस्थाले महानायिकाको उपाधि दियो । नेफ्टाले नै मलेसिया अवार्डमा नीर शाहलाई अभिनय शिरोमणी उपाधिबाट सम्मानित गरेको थियो ।
यसैसाता निजी क्षेत्रको एक संस्था र अभियानले अभिनेता पल शाहलाई रियल हिरो उपाधिसहित सम्मान प्रदान गरेको छ । टेलिभिजन होस्ट प्रकाश सुवेदीले संचालन गरेको रजतपटले पललाई उक्त सम्मान दिएको छ । यसबारे चलचित्र क्षेत्र पनि विभाजित छ । कतिपयले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने पनि बताउँछन् ।
तर, समीक्षक र आलोचक चाहिँ अभिनयभन्दा कलाकारलाई पदरी गुथाइनु सहि नभएको तर्क गर्छन् । फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बा कलाकारलाई पदवी दिइनु शक्तिपूजा बाहेक अन्य नहुने तर्क गर्छन् ।
सरकारले पनि राष्ट्रपतिमार्फत कलाकारलाई बेला-बेलामा विभूषण र तक्मा प्रदान गर्ने गरेको छ । केही वर्षपहिले वरिष्ठ र अति विशिष्ठ कलाकारभन्दै तत्काल संचारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले वर्गीकरणसहित कलाकारलाई पदवी दिएपछि आलोचना भएको थियो ।
प्रकाशित: २०७८ असार १६ गते १८:५९